Shina avo aryry tokana Lighting pole for Dock mpanamboatra ary mpamatsy - Langxu Lighting.
Home > Products > avo andry tokana Lighting Pole > avo andry tokana Lighting pole for Dock
Ny jiro avo poloney dia afaka mizara amin'ny fisandratana sy ny tsy fanandratana. Mihoatra ny 18 metatra ny haavon'ny tsato miakatra. Ny fampandehanana herinaratra dia mety tsara. Aorian'ny fananganana ny fitoeran-jiro dia miakatra ho amin'ny toerana fiasa, afaka esorina ny kapika, poti io fitoerana io, ary voasintona ny tady tariby.
Ny jiro miakatra avo dia avoaka ny fomban'ny fanaraha-maso ara-torolàlana sy herinaratra, mba hahafahan'ireo tontolon'ny jiro ho azo antoka sy ampidinina ambany amin'ny 2,5 metatra avy amin'ny tany ho an'ny fikolokoloana mora. 10 metatra ny halavan'ny tariby mitarika fanaraha-maso lavitra alàlan'ny torolàlana, ary ny mpandraharaha dia afaka mifehy ny fampiakarana ny tontolon'ny jiro amin'ny 5 metatra hiantohana ny fiarovana manokana an'ny mpandraharaha. Ny jiro avo avo karazana koa dia misy tariby fanamoriana. Rehefa nidina ho ambany toerana ambany indrindra ny tontonana jiro, ny tendron-tariby iray dia nampidirina tao anaty falehan'ny rafi-pitantanana elektrika, ary ny tendrony iray dia ampidirina ao anaty boaty junction eo amin'ny tontolon'ny jiro, mba hahafahan'ireo tontolon'ny jiro mihetsika mivantana Powered. , amboary ny jiro.
Mandrehitra jiro avo bolo avo lenta Ny jiro rehetra dia fehezina amin'ny fenitra iraisam-pirenena IP65 mba hisorohana ny vovoka sy ny orana tsy hilentika ary hiantoka ny fiainan'ny baomba. Ny akora misy ny luminaire dia vita amin'ny lovia allerine aluminium sy ny vy tsy miolakolaka izay manana fanoherana tsara.
Ireo jiro avo lenta izay lazainay matetika dia tsy mitovy amin'ny fangatahana. Ny fanasokajiana sy ny anaran'ireo jiro avo lenta dia samy hafa arakaraka ny tranga samy hafa. Ohatra, ilay Dock ampiasaina, antsoina hoe jiro avo poste avo, ampiasaina eo amin'ny kianja, dia antsoina hoe jiro poste avo, nomena anarana taorian'ny jiro avo lenta, seranam-piaramanidina avo, jiro avo roa, fipoahana porofo avo lenta, varahina vy matevina. jiro sy ny sisa. Mino matetika fa maherin'ny 15 metatra ny jiro an-dalambe no antsoina hoe jiro avo avo, manomboka amin'ny 15-40 metatra. Ny karazana dimy voafaritra manokana dia 15 metatra, 18 metatra, 20 metatra, 25 metatra ary 30 metatra. Ny hafa dia amin'ny ankapobeny dia takian'ny mpanjifa ny mamolavola haavo manokana, izay ilay lazainay matetika dia ny jiro avo avo izay mizarazara amin'ny haavony.
Buy avo andry tokana Lighting pole for Dock nyvy nymin'ny Lnyngxu Lighting mpnymnytsy nyry mpnymoknytrny, isikny mnynnynny ny betsaka ny fomba avo andry tokana Lighting pole for Dock ao amin'ny staoky. Welcome ny fitsaharana nyssured ny wholesnyle nyry cusnymized avo andry tokana Lighting pole for Dock Style nyvy nymin'ny ny fnycnyry, isikny dia manome ianao amin'ny chenyp pricelist nyry tsara indrindra quotnytion for ianao.